what, when, why: इन्टरभ्यु
एउटा मान्छे जागिरको लागि इन्टरभ्यु दिन गएछ तर उसलाइ केहिपनि आउदैन रैछ र उसले भर्खरै इन्टरभ्यु दिएर बाहिर निस्केको मान्छेलाइ के के सोध्यो भनेर सोधेछ
१) नेपालको प्र म को हुन ?
उत्तर : गिरिजा प्रसाद कोइराला
२) नेपालमा प्रजात्रन्त कहिले आएको थियो?
उत्तर : प्रयास धेरै अगाडि देखि गरेको हुन सफलता चै २००९ साल मा पाए।
३)चन्द्रमा मान्छे छ ?
उत्तर : साइन्टिस्टहरु तेसै बन्छन अनुसनधान भै रहेको छ।
र पहिलो मान्छे प्रश्नलाइ ध्यान नदिइ उत्तर कण्ठ पर्न थालेछ
जब उसको पालो आयो उ भित्र गएछ र उसलाइ प्रश्न सोधिएछ
१) तपाइको नाम
उत्तर: गिरिजा प्र कोइराला
२)हो र कहिले जन्मनु भयो ?
उत्तर: प्रयास धेरै अगाडि देखि गरेको हुन सफलता चै २००९ साल मा पाए
३) तपाईं पागल हो कि के हो ?
उत्तर: साइन्टिस्टहरु तेसै भन्छन , अनुसनधान भै रहेको छ ।